Muchinguri opposed my abduction: Mukoko – DailyNews
Muchinguri opposed my abduction: Mukoko
HARARE – Human rights campaigner Jestina Mukoko has said Environment minister Oppah Muchinguri-Kashiri vigorously opposed her 2008 abduction by suspected State security agents.
The claims are contained in Mukoko’s book titled The Abduction and Trial of Jestina Mukoko: The Fight for Human Rights in Zimbabwe, published last month.
Mukoko was taken away at gunpoint at dawn in Norton on December 3, 2008 by a group of plain-clothed men who stormed her house and identified themselves as policemen.
In the book, Mukoko revealed that Muchinguri-Kashiri, who was the Zanu PF Women’s League boss at the time, had offered to assist in tracing her whereabouts after she was approached by the Women’s Coalition in Zimbabwe (WCZ).
Mukoko said Muchinguri-Kashiri expressed keenness to assist.
The High Court also ordered police to look for Mukoko but the order was ignored as police denied knowledge of her whereabouts.